Allaha u Naxariistee Cheick Tiote oo la warinayo inuu u geeriyooday DAYACNAAN jirtay aawadeed…(XOG la helay) – Gool FM
“Waan FARAXSANAHAY waayo hadda kaddib kama hor imaanayo Messi.”.
War CUSUB oo Saakay laga helayo Sheekada Chelsea iyo Aleksandr Golovin…(Maxaa soo kordhay??)
Kooxda Chelsea oo diyaar u ah in ay wada hadal la furato Eden Hazard si ay kaga hor istaagto u dhaqaaqista Real Madrid
Real Madrid oo qeyb kaga soo dhigatay qorshaheeda suuqa xagaaga xidiga kooxda Tottenham Hotspur Kieran Trippier
RASMI: Halyayga xulka qaranka Mexico Rafael Márquez oo ku dhawaaqay inuu ka fariistay kubada cagta
Jurgen Klopp oo ka jawaab celiyay wararka ku aadan inuu doonayo saxiixa xidiga kooxda Borussia Dortmund Christian Pulisic
Julen Lopetegui oo kalsooni weyn ka muujiyay Karim Benzema xili lala xiriirinayo inuu u dhaqaaqi doono kooxda Milan
“Waan ixtiraamayaa Messi, Cristiano iyo Neymar, laakiin sanadkan Ballon d’Or waa dhankeena”… Didier Deschamps
Thomas Tuchel oo fariin ku aadan mustaqbalkiisa u diray Adrien Rabiot
Arsenal oo dalab 90 million euros ah u diyaari neysa inay kula soo saxiixato xidig ka tirsan kooxda Juentus
Allaha u Naxariistee Cheick Tiote oo la warinayo inuu u geeriyooday DAYACNAAN jirtay aawadeed…(XOG la helay)
(China) 14 Juunyo 2017. Laacibkii hore ee Newcastle United Cheick Tiote ayaa usbuucii la soo dhaafay si lama filaan ah ugu geeriyooday xerada tababarka kooxda Beijing Enterprises ee dalka Shiinaha kaddib markii uu wadnaha istaagay.
Sportsmail ayaa iminka daaha ka rogeysa in allaha u naxariistee laacibka heystay diinteena Islaamka uu u geeriyooday dayacnaan ka jirtay kooxda shiineeska maadaama aysan xeradeeda tababarka ku heysan qalabka sida deg dega ah loola tacaalo wadnaha sida qalabka lagu kiciyo marka uu si ku meel gaar ah u istaago (defibrillator), iyadoo ay waliba jirto in Shiineesku uu Malaayiin ku qarash gareeyaan ciyaartoyda.
30-jirka ayaa maanta oo Arboco ah lagu duugayay dalkiisa hooyo ee Ivory Costa, laakiin usbuuc iminka laga joogo geeridiisa naadiga Beijing Enterprises ee ka ciyaarta heerka labaad ee horyaalka Shiinaha ayaa weli cadeyn la’ waxa sababay dhimashada Cheick Tiote.
Intaa oo kaliya maahan ee waxay kooxdu sidoo kale ka jawaabi la’dahay ilo wareedyo ilaa 3 gaaraya oo sheegay in qalabka caafimaad ee aasaasiga kooxda aysan ku jirin (defibrillator) ee lagu kiciyo marka uu qofka wadnaha istaago.
Sportsmail ayaa waxaa loo sheegay maalmo ka hor inta uusan dhiman Cheick Tiote in mid ka mid ah kooxda uu walaaciisa ku muujiyay Baraha Bulshada ee WeChat in laacibka ay saameysay inuusan wax cunno ah ama cabitaan ah qaadaneyn qorax soo baxa ilaa qorax dhaca maadaama uu sooman yahay, laakiin warbixintaas ayaa markii dambe la tir tiray.
“Xaalada caafimaad ee kooxaha Shiineeska aad ayay uga liidataa sida aad sawiraneyso,”. Ilo wareed ayaa sidaa lagu yiri.
Ku kale ayaa isna lagu yiri: “Miyay Beijing Enterprises heystaan qalabka (defibrillator)? Labo qof ayay waaxdooda caafimaadka ku heystaan, mid aqoon ayuu u leeyahay shaqadiisa halka midka kalena uu xanuun baabi’iye ku buufiyo ciyaartoyda.”.
Ilo wareed kuwaa ka sii xag jirsan ayaa lagu yiri: “Asal ahaanba ma heystaan qalab caafimaad waxyna aad ugu tiirsan yihiin dawada dhaqan soo jireenka ee Shiineeska.”.
Beijing Enterprises ayaa war ay soo saartay ku sheegtay in isla markiiba Tiote loola cararay Isbital laakiin dhammaan talaabooyinka lagu bad baadin karay waxay caddeynayeen kuwa guul darreystay.
Su’aasha is waydiinta mudan ayaa waxay tahay ma xiriir ayaa ka dhexeeya ciyaartoyda Afrikaanka ah iyo Wadno istaaga?
Diraasad lagu sameeyay Nigeria ayaa soo jeedineysa in 75% ay Afrika ka soo jeedaan ciyaartoyda dhibaatada wadnaha ugu geeriyoota garoomada ciyaaraha tan iyo 1990-kii.
RASMI: Christian Abbiati oo loo magacaabay maareeyaha kooxda AC Milan
RASMI: Barcelona oo Eric Abidal u magacowday....
ale ha u naxariisto shiikh ismail
War CUSUB oo Saakay laga helayo Sheekada Chelsea iyo Aleksandr Golovin…(Maxaa soo kordhay??) https://t.co/hhVfauiu1z
Kooxda Chelsea oo diyaar u ah in ay wada hadal la furato Eden Hazard si ay kaga hor istaagto u dhaqaaqista Real Mad… https://t.co/hlq0ixZJ1f
DHAKHTARNIMO iyadoo Baraneysa ayay isaga dartiis uga soo tagtay Reerkiisa isna wuxuu ugu Abaal guday inuu.....(Aqri… https://t.co/HBcXP3J5E5